TextMagic: Azu ahia zuru oke ederede ozi ederede (SMS) Platform | Martech Zone
Ma ọ bụ nyocha ihe abụọ ma ọ bụ na-eme ndoputa nri abalị, ana m amalite ịchọpụta na enwere m ike karịa iji ozi ederede (SMS) karịa afọ ole na ole gara aga. Echeghị m na ọ bụ naanị m… na-azụ ahịa na ulo oru myiri na-enwe obi ụtọ karịa izipu na nata ozi ederede kama etinyere gị site na oku ekwentị.
N'okwu a, agbanyeghị, otu esi ejikwa nkwukọrịta niile na ọkwa azụmaahịa. Nke ahụ bụ ebe ederede ozi nyiwe na-abata. Na nyiwe dị ka TextMagic, azụmahịa nwere ike izipu ọkwa, ihe ngosi, ihe ncheta, nkwenye, na mgbasa ozi azụmaahịa SMS site na otu njirimara ndị ọrụ.
Statistics na Text Ozi
A na-eziga ozi ederede nde 15.2 na nkeji ọ bụla n'ụwa niile
A na-agụ 95% nke ozi ederede n'ime nkeji 3 ezigara
Ijeri mmadụ 4.2 na-ezipụ ozi ederede n’ụwa niile
90 sekọnd bụ oge nzaghachi maka ozi ederede
75% nke ndị mmadụ na-ahọrọ onyinye iji zipu site na ederede
Akụkụ SMS Nke Na-etolite Azụmaahịa Gị
Ziga ederede na ntanetị - Zipu ederede na ntanetị nye ndị ọrụ gị na ndị ahịa gị. Bubata kọntaktị ma jikwaa ndepụta niile site na akaụntụ TextMagic gị.
Email na SMS - Izipu ederede site na email dị mfe. TextMagic na-atụgharị email gị n'ime ozi ederede ma nyefee ya, na azịza niile wee rute dị ka ozi ịntanetị.
SMS Gateway API - Jikọta ọnụ ụzọ ámá SMS nke TextMagic na weebụsaịtị gị ma ọ bụ ngwanrọ site na iji ngwa SMS API ma gbakwunye ozi ederede na arụmọrụ azụmahịa gị.
SMS Software maka PC & Mac - TextMagic Messenger bụ mmemme desktọọpụ nke na-ahapụ gị izipu ozi ederede ezubere iche nye ndị na-ege gị ntị, ma otu otu oge ma ọ bụ nnukwu.
Mkparịta ụka SMS abụọ - Zipu ma nata ozi ederede ozugbo na mkparịta ụka SMS na-aga n'ịntanetị TextMagic. O zuru oke maka nkwukọrịta dịpụrụ adịpụ na ndị ọrụ na ndị ahịa.
Nkesa SMS - E zigara email na adreesị ndepụta nkesa ozugbo dị ka ozi ederede na nọmba ekwentị niile echekwara na listi.
Anata SMS n'ịntanetị - Jiri TextMagic raara onwe ya nye ma ọ bụ nkekọrịta nọmba SMS iji nweta SMS inbound ma zaghachi ozi ederede gị n'aka ndị ahịa na ndị ọrụ.
Mkpuchi SMS Global - Gaa ndị ahịa gị na ndị ọrụ gị n’ụwa niile ịnweta ohere karịrị netwọkụ mkpanaka 1,000 gafere mba 200+.
Ngwa maka iOS & gam akporo - Ngwa ngwa ziga ma nata ederede SMS, mepụta ndepụta na kọntaktị, jikwaa mkpọsa gị na iji ekwentị gị.
Njikọ SMS Zapier - Jiri Zapier jikọọ TextMagic na ngwa ndị kachasị amasị gị. Ọ bụ akpaaka dị mfe na-enyere azụmahịa gị aka.
Nbanye maka ndị ụlọ ọrụ - Nbanye na TextMagic site na iji nzere nke njirimara njirimara gị dị mfe wee nye ndị otu gị ohere.
Ntuziaka SMS Enterprise - Ihe ndozi banyere ulo oru gunyere ihe nlere anya, inweta ndi dabere na ya, ya na SSO bu ufodu njirimara ndi n’enye aka itolite.
Nnyocha nyocha SMS maka ịnakọta Nzaghachi - Meziwanye ahụmịhe ndị ahịa ma nweta nzaghachi bara uru na ọrụ gị n'otu ntabi anya na ndị na-ege ntị ọ bụla.
Nyocha abụọ-ihe (2FA) SMS - Nyochaa ndị ọrụ site na ozi ederede, chekwaa azụmaahịa dị larịị, ma gbakwunye nchekwa nchekwa gị na ngwanrọ gị.
Nchọgharị ụgbọelu & Nkwado Nọmba - Chọpụta nọmba ekwentị na-abaghị uru na ndị na-ebu ya ozugbo ma nweta nsonaazụ kacha mma na ọnụego nnyefe na mkpọsa SMS gị.
Nchọgharị Email & Nkwado - Lelee ọnọdụ, nnyefe, na ọkwa adreesị nke adreesị ozi-e na ọrụ nkwado email ọkachamara na TextMagic yana API.
Ibido na TextMagic Dị Mfe
Nwere ike ịmalite na usoro atọ dị mfe. Mepụta akaụntụ efu, buru ibu akwụmụgwọ akwụ ụgwọ ma bido izipu na ịnweta ederede.
Mepụta Akaụntụ Akaụntụ - Debanye maka akaụntụ efu gị iji hụ n'onwe gị ka ọ dị mfe. Gbalịa atụmatụ niile ma jiri kredit n'efu ziga ma nata ozi fọrọ nke nta ka ebe ọ bụla n'ụwa.
Ibu Ibu Ego Akwụ ụgwọ - Mgbe ị dị njikere izipu ozi izizi gị, jiri kredit akwụmụgwọ anyị akwụgo ụgwọ iji kwụọ ụgwọ-ka-ịga (enweghị nkwekọrịta, ụgwọ zoro ezo ma ọ bụ ụgwọ na-aga n'ihu).
Zipu ma nata SMS - Zipu ma nata SMS mgbe ọ bụla ị chọrọ iji interface ọrụ onwe anyị dị mfe. Ọ dị mfe dịka izipu ozi email ma ọ bụ SMS site na ekwentị gị.
Debanye aha maka Akaụntụ Nnwale TextMagic na-akwụghị ụgwọ
Ngosipụta: Anyị bụ ndị a TextMagic Mgbakwunye.
Tags: email na smsSMSsms ozisms n'elu ikpo okwuederede ederedeederede ederede apiide ozi ederedeederede